Project Activities | Community Driven Development Project
ဒုတိယအကြိမ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် စည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ် (CF Forum)ကျင်းပ
၁၇-သြဂုတ်လ-၂၀၁၇ နေပြည်တော် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် စည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ် (CF Forum)ဖွင့်ပွဲအား သြဂုတ်လ (၁၇)ရက်၂၀၁၇ တွင် ပျဉ်းမနားမြို့ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြောက်လွှတ်ကုန်း၊ သင်တန်းခန်းမတွင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလှခိုင်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြာ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စီမံက်ိန်းမြို့နယ်များမှ လူထုစီးရုံးရေးမှူးများ၊တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ CF ဖိုရမ် ဒုတိယအကြိမ်အား (၁၇/၁၈.၈.၂၀၁၇)ရက်နေ့များတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ကန်ပက်လက်မြို့နယ်မှ (၂၁)ဦး၊ စေတုတ္တရာ မြို့နယ်မှ(၂၂)ဦး၊ လေးမျက်နှာ မြို့နယ်မှ(၃၆)ဦး၊ သာပေါင်း မြို့နယ်မှ(၂၅)ဦး၊ ကြံခင်း မြို့နယ်မှ(၁၆)ဦး၊ ငါန်းဇွန် မြို့နယ်မှ(၁၁)ဦး၊ မြောင် မြို့နယ်မှ(၁၂)ဦး၊ မိုးညို မြို့နယ်မှ(၁၄)ဦး၊ ချောင်းဆုံ မြို့နယ်မှ (၁၁)ဦး၊ မတူပီ မြို့နယ်မှ(၅)ဦး၊ ထီးလင်း မြို့နယ်မှ(၅)ဦး၊ ပေါက် မြို့နယ်မှ(၅)ဦး၊ ငပုတော မြို့နယ်မှ(၅)ဦး၊ ပန်းတောင်း မြို့နယ်မှ(၅)ဦး၊ ပျဉ်းမနား မြို့နယ်မှ(၃)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၉၆)ဦးခန့်တက်ရောက်ကြပါသည်။	Read More »
ပထမအကြိမ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် စည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ် (CF Forum)ကျင်းပ
၁၄-သြဂုတ်လ-၂၀၁၇ နေပြည်တော် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် စည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ် (CF Forum)ဖွင့်ပွဲအား သြဂုတ်လ (၁၄)ရက်၂၀၁၇ တွင် ပျဉ်းမနားမြို့ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြောက်လွှတ်ကုန်း၊ သင်တန်းခန်းမတွင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလှခိုင်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြာ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စီမံက်ိန်းမြို့နယ်များမှ လူထုစီးရုံးရေးမှူးများ၊တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ CF ဖိုရမ် ပထမအကြိမ်အား (၁၄/၁၅.၈.၂၀၁၇)ရက်နေ့များတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မှ (၃၂)ဦး၊ အမ်းမြို့နယ်မှ(၂၉)ဦး၊ နမ့်ဆမ် မြို့နယ်မှ(၁၈)ဦး၊ တနင်္သာရီ မြို့နယ်မှ(၁၄)ဦး၊ ဘီးလင်း မြို့နယ်မှ (၁၄)ဦး၊ ကျောက်ကြီး မြို့နယ်မှ(၉)ဦး၊ ပလက်ဝ မြို့နယ်မှ(၂၉)ဦး၊ ဒီမော့ဆို မြို့နယ်မှ(၇)ဦး၊ ဖရူဆို မြို့နယ်မှ (၈)ဦး၊ ဗန်းမောက် မြို့နယ်မှ(၁၄)ဦး၊ မိုးကောင်း မြို့နယ်မှ(၃)ဦး၊ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မှ(၅)ဦး၊ ဖားဆောင်း မြို့နယ်မှ (၃)ဦး၊ လွိုင်ကော် မြို့နယ်မှ(၅)ဦး၊ ဆော မြို့နယ်မှ(၅)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၉၅)ဦးခန့်တက်ရောက်ကြပါသည်။	Read More »
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် စည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ် (CF & TF Forum)အခမ်းအနားအစီအစဉ်
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် စည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ် (CF & TF Forum) အား၂၀၁၇ သြဂုတ်လတွင် တကြိမ်လျှင် (၂)ရက်နှုန်ဖြင့် (၅)ကြိမ်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး စီမံက်ိန်းမြို့နယ်များမှ လူထုစီးရုံးရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ တက်ရောက်ရမည်ပြီး အခမ်းအနားကိုပျဉ်းမနားမြို့ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြောက်လွန်ကုန်းသိုလှောင်ရုံဝင်း၊ သင်တန်းခန်းမတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ CF ဖိုရမ် ပထမအကြိမ်အား (၁၄/၁၅.၈.၂၀၁၇)ရက်နေ့များတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မှ(၃၂)ဦး၊ အမ်းမြို့နယ်မှ(၂၉)ဦး၊ နမ့်ဆမ် မြို့နယ်မှ(၁၈)ဦး၊ တနင်္သာရီ မြို့နယ်မှ(၁၄)ဦး၊ ဘီးလင်း မြို့နယ်မှ(၁၄)ဦး၊ ကျောက်ကြီး မြို့နယ်မှ(၉)ဦး၊ ပလက်ဝ မြို့နယ်မှ(၂၉)ဦး၊ ဒီမော့ဆို မြို့နယ်မှ(၇)ဦး၊ ဖရူဆို မြို့နယ်မှ(၈)ဦး၊ ဗန်းမောက် မြို့နယ်မှ(၁၄)ဦး၊ မိုးကောင်း မြို့နယ်မှ(၃)ဦး၊ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မှ(၅)ဦး၊ ဖားဆောင်း မြို့နယ်မှ(၃)ဦး၊ လွိုင်ကော် မြို့နယ်မှ(၅)ဦး၊ ဆော မြို့နယ်မှ(၅)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၉၅)ဦးခန့်တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ CF ဖိုရမ် ဒုတိယအကြိမ်အား (၁၇/၁၈.၈.၂၀၁၇)ရက်နေ့များတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ကန်ပက်လက်မြို့နယ်မှ(၂၁)ဦး၊ ...	Read More »
အလုပ်ကြေငြာစာ(REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST-Township Level Technical Assistance)
CDD Project Socialization Workshop in Chaung Zon Township, Mon State
CDD Project Socialization Workshop was held at Kyun Thar Yar Hall, Chaung Zon Township, Mon State at9am on 19 June, 2014. The project was implemented by the Department of Rural Development under the Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development and funded by the World Bank. Director U Hla Khaing (DRD-Head Office), Deputy Director Daw Mee Mee Htwe ...	Read More »